Pliocene Epoch: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime Ogechi nọ na Oge Neogene na e kewara ya n’ọtụtụ oge. Taa, anyị ga-ekwu maka oge ikpeazụ nke oge a nke akpọrọ Pliocene. Pliocene malitere ihe dịka nde 5.5 gara aga wee kwụsị nde 2.6 afọ gara aga. Oge a nwere ike ị dị ezigbo mkpa site na echiche nke mmadụ ebe ọ bụ na n'oge a ihe omimi mbụ achọpụtara nke Australopithecus. Umu anumanu a bu hominid mbu di na Afrika.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Pliocene.
1 Nkpuru osisi Pliocene
1.1 Igwe ihu igwe
1.2 Ihe dịgasị iche iche
Oge a mechiri site na mgbanwe dị oke mkpa n'ihe metụtara ụdị ndụ dị iche iche, ma n'ogo nke flora na fauna, na nke mmadụ. Mgbanwe ndị a bụ n'ihi n'eziokwu na ụmụ anụmanụ na osisi ga-amalite ịnọ na mpaghara dịgasị iche iche nke ọnọdụ ihu igwe nwere oke. Ọnọdụ ndị a n'ọtụtụ ụdị ka dị ruo taa.
Oge a dịgidere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde afọ 3. Enwere mgbanwe ụfọdụ n'ogo nke oke osimiri. Na Pliocene niile enwere mgbanwe miri emi na nnukwu mgbanwe na mmiri. Otu n’ime ihe kacha mara amara bụ nkwarụ nkwurita okwu dị n’etiti Osimiri Atlantik na Oke Osimiri Pasifik. Nke a bụ nsonazụ nke Isthmus nke Panama. Dika mgbanwe amalitela n'oké osimiri ndị a, e jikwa mmiri sitere n'Oké Osimiri Atlantic juputakwa na Osimiri Mediterenian. Nke a kwụsịrị nsogbu nnu a na-akpọ Messinian.
Otu n'ime ihe ndị kacha dị ịrịba ama nke oge Pliocene bụ ọdịdị nke ụkwụ ụkwụ mbụ nke ụkwụ ụkwụ. Ihe omuma a di site na otutu onu ogugu ndi mmadu anakọtara site n'oge a. A kpọrọ aha hominid mbụ pụtara na mbara ụwa a Australopithecus. Ọ bụ transpendental na mmalite nke ụdị mmadụ dị ka anyị si mara ya ebe ọ bụ na ụdị mbido mbụ nke genus Homo sitere.
Nkpuru osisi Pliocene
N'oge a, ọ dịghị nnukwu ihe omume ahụ. Na Mgbagharị kọntinent Ọ na-aga n'ihu na-agagharị ma na-agbanwe kọntinent ahụ n'ọnọdụ ha ugbu a. N’oge a, ngagharị nke kọntinent nile jiri nwayọ nwayọ ma site n’oké osimiri ma n’oké osimiri. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnọdụ dịka ha nwere taa. Ha dị naanị kilomita ole na ole site n'ebe dị anya.
Otu n’ime ihe dị mkpa gbara ọkpụrụkpụ na mbara ala Pliocene bụ mmalite nke ala mgbada nke Panama. Nhazi a bụ ihe jikọrọ North na South America. Ihe omume a gabigara ókè ebe ọ nwekwara mmetụta na ihu igwe nke ụwa dum. Site na ala mmiri a, e mechiri nkwukọrịta niile dị n’etiti Oké Osimiri Pacific na Atlantic.
N'elu ogwe osisi ndị ahụ, mmiri Antarctic na nke Arctic dara ezigbo oyi, na-aghọ oyi kachasị oyi na mbara ala. Enwere ozi ndị ọkachamara chịkọtara na-ekwu na n'oge a, e nwere ezigbo ọdịda mmiri na oke osimiri na ọ bụ n'ihi na ọnụ ọgụgụ pola na glacial ụba. Nke a nwere nsonaazụ nke mere ka ụfọdụ iberibe ala pụta na-egwuzi ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, enwere ihe gbasara akwa mmiri nke jikọtara Russia na kọntinent America. A na-etinyezi akwa mmiri a ma jikwa ya site n'ụzọ ejiri mara Bering Strait.
N'oge a nke were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde afọ 3, ihu igwe dị iche iche ma na-agbanwe agbanwe. Dabere na ndekọ ndị ndị ọkachamara gbasara ihu igwe chịkọtara, enwere oge mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-arị elu nke ukwuu. A gosipụtara nke a dị iche n'oge ụfọdụ, ọkachasị na ngwụcha Pliocene, mgbe okpomọkụ gbadara nke ukwuu.
Otu n'ime njirimara ihu igwe kachasị mkpa n'oge a bụ na ọ bụ ihu igwe oge. Nke ahụ bụ, ha na-eweta oge dị iche iche, a kara akara abụọ n'ime ha. Otu bụ oge oyi nke ice rutere n’elu ebe niile n’ụwa. Nke ọzọ bụ ọkọchị ebe akpụrụ gbazee ma nye ụzọ ihu ala dị efekarị.
Na mkpokọta, enwere ike ịsị na ihu igwe dị na ngwụcha Pliocene bụ ezigbo mmiri n'ihi mmụba nke okpomọkụ anyị tụlere na mbụ. Tụkwasị na nke a, ọ nwetara ọdịdị dị nkụ ma mee ka gburugburu gbanwee ma gbanwee site n'oké ọhịa gaa savannas.
Anụmanụ ahụ dịgasị iche iche n'oge Pliocene wee bịa weghara gburugburu gburugburu. Agbanyeghị, ahịhịa ahụ nwere ụdị ndaghasị azụ n'ihi na ọnọdụ ihu igwe adịchaghị mma. Na ịdị adị nke oge oyi ebe ice biri ọtụtụ ụwa na oge ọkọchị kpọrọ nkụ ma kpọọ nkụ, enweghị ọnọdụ dị mkpa maka mmepe ma ọ bụ ịchepụta osisi.
Osisi ndị kachasị baawanye n'oge Pliocene bụ ala ahịhịa. Nke a bụ n'ihi na ha bụ osisi nwere ike imeghari n'ụzọ dị mfe na okpomọkụ dị ala nke jupụtara n'oge Pliocene. Fọdụ ahịhịa na-ekpo ọkụ dị adị, karịsịa n'oké ọhịa na n'oké ọhịa, ma ọ bụ nanị n'ókèala ụwa. Ọ bụ n'ógbè a ebe ọnọdụ ihu igwe dị maka ha ka ha wee too ma gbasaa.
Mgbanwe ihu igwe nke mere n’oge a mere ka nnukwu ala dị iche iche gosipụtara nke ukwuu na njirimara nke ọzara. Offọdụ n'ime mpaghara ndị a ka juru ebe niile taa. Banyere ebe dịkarịrị nso na okporo osisi ndị ahụ, e guzobere otu ụdị ahịhịa na-eto eto taa. Ha bụ conifers. Nke a bụ n'ihi na ha nwere nnukwu nguzogide oyi ma nwee ike ịmalite na obere okpomọkụ.
Dịka anyị kwurula na mbụ, otu n’ime ihe ịtụnanya gbasara mmadụ malitere n’oge a. Anụmanụ na-ahụkwa oke ọkụ radieshon na-eme ka ha gbasaa n'ọtụtụ ọnụ ọgụgụ dị iche iche.
Site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere Pliocene na isi atụmatụ niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Pliocene
Ihe omumu banyere ala